मानवअधिकारकर्मी भन्छन् : कुमारको हत्या नियोजित (प्रतिबेदनसहित) – On Khabar
अनखबर /साउन १९
एक छाक शाकाहारि खानालाई मात्र रु २५ !
Spread the love अनखबर चैत १३, भैरहवा । एक छाक शाकाहारी खानाको मूल्य कति पर्छ ? सामान्य होटलमा न्यूनतम एक सय रुपैयाँदेखि तारे होटलमा अधिकतम एकहजार रुपैयाँसम्म । यदि कसैले २५ रुपैयाँमै शुद्ध शाकाहारी खाना दिन्छु भन्यो भने धेरैलाई पत्याउन मुश्किल पर्छ । तर, भैरहवामा एकजना व्यवसायीले यस्तै अपत्यारिलो कामको शुरुवात गर्दैछन् । पेशाले कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियर […]
Spread the love अनखबर माघ १७, बुटवल एनसेल टेलिकम सेवाले राज्यलाई ७२ अर्ब कर नतिरेको भन्दै आज अखिल (क्रानितकारी) रुपन्देहीले कालो ब्यानरसहित विरोध सभा गर्दै तत्काल कर तिर्न र नतिरे टावरहरु ध्वस्त पारिदिने चेतावनी दिएका छन् । आज रुपन्देहीको मुर्गियास्थित मुर्गियाचोकमा गरिएको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै अखिल (क्रान्तिकारी)का जिल्ला अध्यक्ष रमेश गैरेले ऐनसेलले नेपालमा कर नतिरे […]